Fiatrehana ny fifidianana : Ao ambadiky ny Filoha Rajaonarimampianina ny rehetra -
AccueilRaharaham-pirenenaFiatrehana ny fifidianana : Ao ambadiky ny Filoha Rajaonarimampianina ny rehetra
Mitohy hatramin’ ny omaly ny fivoriana izay tanterahin’ireo vovonana maro an’isa ahitana ireo tompon’andraikitra maro eto amin’ ny firenena toa ny minisitra, solombavambahoaka, senatera, antoko politika maro isan-karazany manohana ny filoham-pirenena ankehitriny . Raha sy nivoitra nandritra io fivoriana io, dia tsapa ny faharesen-dahatra ireo rehetra amin’ ny fanohanana ny filoham-pirenena ankehitriny amin’ ny fifidianana ho avy. Ny fanamafisana orina ny vovonana izany no niarahan’ ny rehetra nanamafy nandritra ny fivoriana izay nanomboka ny alarobia lasa teo, ary tsy nisy ny niala an-daharana, ka ny “ firaisan-kina ho an’ ny fisandratan’i Madagasikara” no hatao anaran’ ny vovonana . Marihina fa ny fisandratana dia tetikasa izay napetraky ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hatramin’ ny taona 2030. Amin’ ny maha fifidianana azy izay moa izany dia lohalaharana aorian’ny fanekena fa hiaraka hanohana olona iray ny rehetra dia ny fijerena kandida, nandritra ny fivoriana moa raha ny vaovao voaray ihany dia niarahan’ny rehetra nanaiky ny hanohana hatrany an’ i Hery Rajaonarimampianina amin’ ny fifidianana izay ho avy. Noho izany dia fiaraha- mientana goavana amin’ ny fanohanana ny filoham-pirenena ankehitriny no niharan’ireo eo anivon’ ny vovonana firaisan-kina ho an’ny fisadratan’ i Madagasikara nanaiky, izy ireo rahateo dia avy amina antoko maro toa ny AVI, MFM,Leader Fanilo.
Araka ny fantatra ihany koa dia anisan’ny nodinihina nandritra ny fivoriana ny mikasika ny fomba hitantanana ny vovonana , ka soso-kevitra maro no nandeha tamin’ izany, toa ny hoe hiaraha- mitantana ny vovonana. Saingy samy tsy nanaiky io soso-kevitra io rahateo ireo mpikambana tonga nivory, ka tapaka izany fa i Rivo Rakotovao no hiandraikitra ny fandrindrana ny vovonana ho an’ny fisandratan’i Madagasikara. Noho izany araka ireo nambara rehetra ireo , dia fantatra fa hisy ny fanazavana izay hoentina mikasika ny asa sy ny fahavononan’ny vovonana amin’ ny fanohanana ny filoha amperin’asa, ka amin’ izany dia haneho ny fahavononany avokoa ny rehetra. Manan-danja tokoa rehefa fifidianana tahaka izao no resahina ny lafin’ny fanohanana avy amin’ ireo antoko sy tompon’andraikitra maro samihafa, satria dia manaporofo ny faharesen-dahatra amin’ ny asa efa vita sy natao izany, ary eo ihany koa ny vina izay napetraka ho amin’ ny ho avy. Marihina etoana fa fivoriana fahefatra tao anatin’ ity taona ity izay no efa notanterahin’ny vovonana nanomboka ny fahavalon’ ny volana febroary, midika izany fa vonona amin’ ny fifanohanana sy ny paikady izay hapetraka mialoha, mandritra ary aorian’ ny fifidianana ihany koa ny vovonana.